बैंकको सेयर छ ? खुल्यो २१४% हकपद्र कहाँ–कहाँबाट आवेदन दिने ? जान्नुहोस् « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
बैंकको सेयर छ ? खुल्यो २१४% हकपद्र कहाँ–कहाँबाट आवेदन दिने ? जान्नुहोस्
काठमाडौ । झापाको दमकमा मुख्य कार्यालय रहेको कन्काई विकास बैंकले हाल कायम चुक्ता पूँजीको २१४ प्रतिशत हकप्रद बिक्री सुरु गरेको छ । बैंकले एक बराबर दुई दशमलव १४ कित्ताका दरले ३२ करोड १० लाख रुपैयाँको ३२ लाख १० हजार कित्ता हकप्रद सोमबारदेखि निष्काशन गरेको हो ।
तीन जिल्ले बैंक कन्काईले हकप्रद बिक्री गर्नका लागि सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । बैंकको हकप्रदमा सिद्धार्थ क्यापिटलको कार्यालय नक्साल तथा कन्काई विकास बैंक र सिद्धार्थ बैंकका सबै शाखाहरुबाट आवेदन गर्न सकिन्छ ।
बैंकले हकप्रद निष्काशनका लागि गत असार १९ गते सेयरधनी पुस्तिका बन्द गरेको थियो । असार १८ गतेसम्म कायम सेयरधनीले हकप्रदमा आवेदन गर्न पाउने छन् । बैंकको हकप्रदमा भदौ ११ गतेसम्ममा आवेदन दिईसक्नुपर्नेछ ।
हाल १५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको कन्काईको हकप्रद बिक्रीपछि पूँजी ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । बाँकी रहेको दुई करोड ९० लाख रुपैंया बराबरको बोनस बितरण गरी कन्काइले चुक्ता पूँजी ५० करोड रुपैंया पुर्याउने योजना रहेको छ ।
प्रकाशित मितिः २०७४ साउन ९
अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रमा के छ त अर्थ सुधारका योजना ?
काठमाडौ । राष्ट्रको समग्र आर्थिक अवस्था देखाउनको लागि सरकारले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेको छ ।
काठमाडौ । शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडले स्थानिय र सर्वसाधारणको लागि ५२ करोड ८० लाख रुपैँया बराबरको
काठमाडौ । तपाईले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मार्फत सेयर खरिद बिक्री गर्ने गर्नुभएको छ ? नेप्सेमा
काठमाडौँ । सिमसिमे पानीको बाबजुद पनि महाशिवरात्रिका अवसरमा बिहानैदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनको भीड लागेको छ